Daawo: Shirweyne looga arinsanaayo arimaha qaxootiga iyo xal-u heliddooda oo muqdisho ka furmay – Kismaayo24 News Agency
Daawo: Shirweyne looga arinsanaayo arimaha qaxootiga iyo xal-u heliddooda oo muqdisho ka furmay
by Tifaftiraha K24 28th August 2017 022
Muqdisho, 28, Agoosto 2017……Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa maanta furay Shirweynaha qaran ee xal-u-helidda Qaxootiga dalka dib ugu soo laabanaya iyo barakayaasha Soomaaliyeed. Waxana shirkani soo qaban qaabisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka, gaar ahaan waaxda u qaabilsan Qaxootiga iyo Barakacayaasha qaranka.
Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa shirkani soconaya saddexda maalin ka sheegay hannaanka iyo qorshaha ballaaran ee uga yaalla Xukuumadda dib u dejinta dadka Soomaaliyeed ee colaadaha iyo abaaraha ka dhacaya dalka ay saameeyeen.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka ayaa u mahad-celiyey hay’adda Qaxootiga qaranka iyo hay’adaha caalamka ee ka qeyb qaadanaya badbaadinta qaxootiga Soomaaliyeed ee dibedda iyo gudaha dalka ku barakacay.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka ayaa yiri” Dawladda Soomaaliyeed waxay diyaar u tahay inay qabato wax walba ay kari karto oo dadka Soomaaliyeed ku heli karaan nolol ka wanaagsan midda ay hadda ku nool yihiin.
Kulankan ayaa waxaa ka qeyb galay Wasiirro ka tirsan Xukuumadda, masuuliyiin ka socda dawlad-gobolleeyada dalka ka jira iyo Hay’adda qaxootiga u qaabilsan Q/M ee UNHCR. Waxana dhammaadka shirkani ka soo bixi doona warmurtiyeed la xiriira sida loo wajahayo Qaxootiga iyo Barakacayaasha Soomaaliyeed.
Akhriso: Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha soomalia oo gabi ahaanba soo afjartay jiritaanka rugta ganacsiga iyo warshadaha
Daawo: Madaxweyne axmad madoobe oo guriga martida magaalada kismaayo kulan kula qaatay Danjire ku xigeenka Jarmalka ee Soomaaliya
DAAWO: Madaxwaynihii hore Galmudug iyo Layaabka Galkacyo.
gurey 2nd February 2018
Daawo: Madaxweyne ku xigeenka puntland oo garoowe ku qaabilay wafdi ka socda dowladda….
Tifaftiraha K24 16th May 2017
Dhagayso oo Daawo Gen Darwiish oo ka hadlay arimo Xasaasi ah
admin 31st August 2016 31st August 2016